Ka qayb galkii shirkii Sport& Dhaqanka [Culture] ee Paris.
Waxaa maalintii isniintii 26-05-03 dalka Norway dib ugu soo noqday gudoomiyaha ururka Sport& Culture ee dalka Norway Mr Abdulgadir Mahad ( Turbashaash) isagoo ka soo qayb galay shir ku saabsan Sport & culture ka dhacay magaalada Paris (France) isagoo masalayay dhamaan dhalinyarada Somaliyeed ee dagan Europe.
Waxaa kaloo gudoomiyuhu masalayay xiriirka Somaliyeed ee kubada miiska, halkaas oo ay ka dhacaysay ciyaarihii kubada miiska ee dunida oo dhan. Waxa iyana halkaa yimid gudoomiyaha T.T ee dalka Somaliya iyo laba cayaartooy oo ka socday Mugadisho, oo halkaa ka muujiyay cayaaro aad u soo jiitay dadwaynihii daawanayay.
Waxa uu Mahad ka qaybgalay shirar aad u balaaran, iyo doorashooyin lagu dooranayay madaxda masalaysa Africa, iyo meesha la gu qabanayo sanadka danbe oo noqotay Qadar, halkaasna uu codkoodii ku siiyay in ay Qadar noqoto meesha lagu qabanayo 2005ka, waxa uu isna casuumad ka helay wadanka Qadar una hambalyaysay doorashada uu siiyay.
Mar aan hadaba gurigiisa ugu tagnay, waydiiyayna waxyaabaha ay qaban doonaan bilahan soo socda waxa uu noo sheegay, in ay dadaal wayn ugu jiraan in ay isku xiraan saxiibtinimada Magaalada Hargaysa iyi Lillelhamar.
Hargaysa oo ay hada u doorteen magaaladii nabada ee Africa.
Waxay jecelyihiin in ay ka keenaan koox isugu jirta madax dhaqameed, fanaaniin, cayaartooy, iyo hooyooyin.
Waxuu kaloo noosheegay in ay ilaa iyo hada la xiriireen, koox la yiraa walaalo Hargaysa oo uu madax u yahay Ahmed Al-ashar. oo jooga magaalada London.
Waxay kaloo dadaal wayn ugu jiraan in ay xiriirkoodii sii kordhiyaan , dhamaan ururada ka dhisan Norway, gaar ahaan Somali-walfare (S.W.O) ururada dumarka iyo dhamaan dhalinyarada jecel dhaqanka iyo sportiga.
Somali Sport Culture waxay caawimaad ka heleen Europe, Post-bank, Reema1000, Riimi, Maqaayadaha Somaliyeed, iyo dhamaan dhalinyarada Somaliyeed.
Somali Sport &Culture waxay deeq u bixiyeen 25 kursi,2 miis, Hal sabuurad, 10 kumbiyuutar, qalimaad, iwm.
Waxayna inta badan ugu deeqeen Somali-walfare Norway.
Waxay kaloo sanadkan ugu deeqi doonaan qalab Sport Magaalada Hargaysa ( Somaliland).
Waxa kaloo uu gudoomiyuhu noo sheegay in ay xubno farabadan ku soo biiri doonaan ururka, isaguna uu dhowaan wareejin doono marka la gaaro bisha 30 Agust, oo ah mudadii ay uga ekayd sii haynta xilkan. Wuxuuna aad u aaminsanyahay gudoomiyuhu nin xil qaaday eed qaad.
Waxa kaloo uu hadaladiisii ku daray in uu jecelyahay in ay dhamaan dhalinyarada dhaqanka iyo Sportiga jecel ay ka soo qayb galaan hawshan culus , lana saxo qaladaadkii hore, lana sii wado waxyaalihii wanaagsanaa ee laqabtay.
Waxaanu ognahay dad badan oon ururkan ku jirin oo runtii si aad iyo aad ah noo caawiyay, iyagoo waliba xil iyo dhaqaaleba ka doonayn, xumaantuna ka dheertahay, wanaaguna ku badanyahay.
Waxa kaloo uu hadalkiisii ku sii daray, in ay dhowaan tagi doonaan magaalada Danhaag ee dalka Holland iyaga oo gacmaha is haysta, wiilal iyo gabdhaba, soona noqon doonaan iyaga oo gacmaha is haysta. Waxaan halkaa joogi doonaa hal asbuuc, oo sidii aan halkan ugu soo dhaweeynay reer Holland ay iyaguna noogu soo dhaweeyn doonaan halkaas. Waxaynan balan qaadeen, soo dhaweeyn yaableh in aan ka heli doono reer Holland. Waxaan kaloo halkaa ka baran doonaa, dhaqamada kala duwan ee dalka Norway iyo dalka Holland, ciyaaro xiisa leh, cuntooyin macaan, hurdo raaxa leh. Iyo iyadoon marnaba lagaa caajisin, waxaan kaloo la kulmi doonaa fanaaniinta Holland oo si wanaagsan noo soo dhaweeyn doona.
Anaga waxaa nalooga baahan yahay dulqaad, ismaqal, ixtiraam, wixii naloo garto in aan aragno, uguna mahad celino.
Wixii naga qaldama in aan marka aan soo noqono is waydiino, anaga oo is maqlayna, qayladuna nagu yartahay.
Waxaadna ogaataa wax walba oo qalad ah in la saxi karo, waa hadii uu dulqaad jiro.
Ururkani cid walba ayuu u furan yahay is qor hadii aad rabtid in aad ka mid noqoto, la soo xiriir gudiga qaabilsan, hadii ay ahaan lahayd kubada cagta ama dhaqankaba. Ogowna xilka adaa haya adiga ayaa cida aad doonayso dooran kara qofkii aadan doonayna ka tagi kara, hadii aad doonayso in aad ururkan aad wax ka ogaato ku soo biir, fikradaada dhiibo.
Waxaa mahadaa leh dhamaan dadwaynaha Somaliyeed ee kaladagan dunida oo dhan, gaar ahaan kuwa aan jeclayn siyaasada iyo midab takoorka.
By bile email bile123@hotmail.com
Faafin: SomaliTalk | May 31, 2003